Other News 9 November 2008 23:12 (UTC+04:00)
Zimbabwean opposition leader Morgan Tsvangirai asked a summit of southern African leaders on Sunday to set a deadline for an agreement on forming a cabinet to end a deadlock threatening a power-sharing deal, Reuters reported.
One of Tsvangirai's demands to the summit was "imposing a deadline on the agreement" for formation of a new cabinet.
Tsvangirai and President Robert Mugabe have been deadlocked over allocation of important cabinet positions since the September 15 deal, which Zimbabweans hoped would produce a united leadership to revive the ruined economy in the country where inflation is the world's highest and malnutrition widespread.
"The people of Zimbabwe are suffering and they need immediate salvation. Frustration and anger is setting in and I hope and trust that the leadership in this room will be equal to the task that history has imposed on you," Tsvangirai said in the speech.
Asked if he expected a deal at the summit, with Mugabe and Tsvangirai in attendance, opposition MDC Secretary-General Tendai Biti shook his head in disappointment and told Reuters: "Does someone do this if he agrees?"
Zimbabwean state media reported earlier that Mugabe's government would not change its stance on key cabinet positions and the opposition should accept joint control of the interior ministry.